चुनावको मुखैमा अर्को पार्टीले गर्यो युद्धको घोषणा, के हुन्छ अब ? — Imandarmedia.com
चुनावको मुखैमा अर्को पार्टीले गर्यो युद्धको घोषणा, के हुन्छ अब ?
काठमाडौ। संयुक्त वीर गोरखाली संघले वैशाख २४सम्म वैचारिक युद्धको घोषणा अन्तर गत वैचारिक युद्ध तथा शान्ति दूत लडाकु सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
मंगलबार राजधानीको संवाद डबलीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै देशका अधिकाशं राजनीतिक दलहरुले युवाहरुको जुझारुपनाको दूरुपयोग र शोषण गरेकोले त्यसबाट बाहिर निस्कनुपर्ने बताएको छ ।
संयुक्त वीर गोरखाली संघलले विप्लव संघर्ष समिति, माओवादी संघर्ष समिति र राष्ट्रिय रक्ष क्रान्ति संघर्ष समितिसँगको समन्वयमा विश्व शान्ति र मानवतावादको निमित्त एकीकृत मौलिक जनविद्रोह यात्राको वैचारीक युद्ध घोषणा गरेको हो ।
उनिहरुले नेपाली क्रान्तिको बाँकी कार्यभार युवाहरुको काँधमा आइपरेकोले सम्पूर्ण देशभक्त यूवा र राष्ट्रवादी जिम्मेवार बनेर देश जोगाउन लाग्नु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
कर्मनिष्ट रक्ष कुमार राई, कर्मनिष्ट संजोक थापा, कर्मनिष्ट टाइगर सुबेदी, कर्मनिष्ट सागर लिम्बु, कर्मनिष्ट कथम तामाङलाई टिका तथा खादा लगाएर सम्मान गरेको छ ।
सो कार्यक्रममा वरिष्ट अभियान्ता तथा पत्रकार प्रेम कैदी, अधिवक्ता सुदर्शन जोशी, अभियान्ता इशरत अलि र सलाउदिन मियाँ, सारदा शाही, गजेन्द्र अर्याल, विकि राँणा, सतिस नायक लगायतले देश; दिन दुई गुणा र रात चौगुणाका दरले
संकटमा पर्दै गएको। र विदेशीहरुको रणभूमी बन्ने खतरातिर अभिमुख भएकोले सम्पूर्ण युवा एवं जिम्मेवार नागरिकहरु आकाशवाँणी नेत्रवाद दर्शनमा एकजुट हुन आह्वान गरे ।
शान्तिदूत लश्कर प्रमुख बुद्ध जी.एम.सी.ले अब पनि देशका युवाहरु अक्रमन्य राजनीतिक पुराना दलहरुको पछि लागेर उनिहरुको सत्ता प्राप्तिको भर्याङ हुने आधार बन्ने हो भने देशको अस्तित्व नामेट हुने चिन्तन व्यक्त गरे।
सो सम्मान कार्यक्रमको अध्यक्षता राष्ट्रको ढुङ्गा–माटोलाई प्रतिक बनाएर सञ्चालन तम्पासेर राईले गरेका थिए। यस अघि चौतर्फी बिरोधकाबीच देउवा सरकारले संसदबाटै पास गरेको अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीबिरुद्ध सशस्त्र युद्धको घोषणा गरिएको थियो।
हिमाल सुरक्षा परिषद नेपाल’ले ‘सशस्त्र युद्ध’को घोषणा गरेको जनाएको थियो। भूमिगत शैलीमा आतङक सिर्जना गरिरहेको सो समूहले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सशस्त्र युद्धको घोषणा गरेको जनाएको छ।
हाम्रो उन्नति र समृद्धी गर भनेर हो। उनले भने- ‘तर त्यो उल्टो हुन्छ भने नेपालका ३ करोड जनताले सोच्नुपर्छ, संसदलाई दिएको त्यो सार्वभौमशक्तिको अधिकार जनताले फिर्ता लिनुपर्छ । त्यो संसदबाट जनतामा फर्काउनु पर्छ । र संसदलके नसकेको लडाँई जनताले लड्नुपर्छ । संसदले देशको रक्षा गर्न सकेन जनताले देशको रक्षा गर्नुपर्छ ।
उनले फागुन १५ राजा महेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्था लागू गरेको पुस १ भन्दा खतरनाक कालो दिन रहेको दाबी पनि गरे। ‘कथित जनताको संस्था भनिने संसदबाट नेपाली जनतालाई घात गर्ने घटना घट्यो फागुन १५ गते। यो दिन नेपाली इतिहासमा पुस १ गतेजस्तै कालो दिनका रुपमा इतिहासका रुपमा अंकित भएको छ, उनले भने।